Salaadda si aad u hesho waxyaabo lumay. ? Oo La Xaday [San Antonio]
4 Akhriska Min
Tukashada si aad u hesho waxyaabo lumay Aad ayey muhiim u tahay maxaa yeelay marar badan waxaan nafteena ku helnaa xaalado ay ku murugsan yihiin waxyaabo qaar inaga luntay sida furayaasha guriga ama waxyaabo kaloo muhiim ah sida lacag.
Runtu waxay tahay in haysashada ducadan waxay naga caawin kartaa oo keliya mahelin raadinta wixii naga lumay laakiin sidoo kale xasilloonida dhexe ee hawsha raadinta maxaa yeelay waxay noqon kartaa daqiiqad kacsan oo sabir iyo xasillooni ay badanaa ka maqan yihiin laakiin taasi waa Salaadda ayaan uga soo kaban karnaa si aan uga fikirno oo aan si ficil ah wax u qabanno.
1 Ducada si loo helo waxyaabo lumay Waa maxay Quduuska?
2 1) Ducada San Antonio waxyaabo lumay
3 2) Salaad si aad uhesho waxyaabaha San Cucufato
4 3) Salaad si aad uhesho waxyaabo lumay ama xaday
4.1 Nalal ma shidi karaa markaan tukanaayo?
4.2 Goormaan tukadaa salaadda si aan u helo waxyaabo lumay?
Ducada si loo helo waxyaabo lumay Waa maxay Quduuska?
San Antonio Wuxuu caan ku ahaa dad badan oo aamin ah oo ah waxyaabaha lumay maxaa yeelay isaga qudhiisa, markii uu noolaa, wuxuu marqaati toos ah u ahaa dhacdooyinka qaarkood oo aad ugu adkeyd gacanta aadanaha.
Nolosha sheydaanku waa mucjiso bilow ilaa dhamaad hadana, waxaas oo dhan, wuxuu Noqday Caawiyaha ugu weyn ee dadka ay wajahayaan dhibaatooyin la xiriira luminta badeecooyinka qaarkood.
Salaadaha kale ee lagu sameyn karo kiisaska noocaas ah waa San Cucufato madaama tani ay ahayd wacdiye injiilka meelaha fog fog oo aysan jirin cid ku dhiirrigelisay inay aadaan.
Salaaduhu waxay bilaabeen in lagu shubo isaga maxaa yeelay, isaga iyo San Antonio, wuxuu noqday kaaliye awood badan oo jawaabihihiina waa kuwo sax ah oo qaas ah oo ay u yihiin wax la yaab leh.
1) Ducada San Antonio waxyaabo lumay
«Saint Anthony, oo ah addoonkii Ilaah ee ammaanta badnaa, oo caan ku ahaa mudnaantaada iyo mucjisooyinka xoogga leh, naga caawi inaan helno waxyaalaha lumay; na siiya kaalmadaada tijaabada, oo u iftiimiya maskaxdeena raadinta doonista Eebbe.
Naga caawi inaan mar kale helno nolosha nimcada oo dembiyadeennu baabi'isay, oo na hoggaamiso dhaxalka ammaanta Badbaadiyuhu ballan qaaday.
Waxaan taas uga baryaynaa Masiixa Rabbigeenna.
Tukashadani waa la samayn karaa wakhti kasta ama xaalad kasta maxaa yeelay San Antonio wuxuu markasta dhegeystaa codsiyada dadkiisa oo haddii uu dalbanayo mucjiso gaar ah jawaabtu si dhakhso badan ayey ku imaaneysaa.
Xusuusnow in salaaduhu xoog badan yihiin oo ay noqdaan hub qarsoodi ah oo aan adeegsan karno markasta oo aan u baahanahay maxaa yeelay waxa kaliya ee loo baahan yahay waa inaan lahaano iimaan.
2) Salaad si aad uhesho waxyaabaha San Cucufato
Waan lumiyay (dheh kuwa lumay), Waxaan rabaa inaan ka soo kabsado, oo haddaanan ku dhinanin oo aan dilaaco, waxaan sameeyaa kubadahaaga ato, San Cucufato, waana xiran yahay, ilaa (dhaho kan lumay) gacmaheyga waan ku soo laaban doonaa. Aamiin ”
San Cucufato waa mid ka mid ah cibaadooyinka ugu awoodda badan oo aan u jeesan karno waqtiyo rajo xumo iyo murugo leh markii aannaan helin alaabteena.
Si kasta oo ay u adag tahay waxa aan dalbanayno, kuwanu waa ducooyin xoog leh oo la samayn karo wakhti kasta.
3) Salaad si aad uhesho waxyaabo lumay ama xaday
Ilaaha daa'imka ah iyo Aabbaha Xoogga leh, Rabbiga samada iyo dhulka, oo isaga oo Ciise Masiix ah, Wiilkaaga, naftaada u muujiya miskiinka kuwa fudud iyo kuwa is -hoosaysiiya, waan kuugu mahadnaqaynaa maxaa yeelay waxaad ka buuxisay Saint Aparicio barakaysan jacaylkaaga, si aad ula noolaato fudaydka qalbiga oo u hanqal taagaya alaabta Jannada.
Naga caawi inaan ducaddaada, aan ku guuleysanno waxaan weydiisaneyno, in gacantaada xoogga badan ay na soo gaarsiin doonto sida ugu dhaqsaha badan wixii naga lumay ama nalaga qaatay:
(ku celi waxa aad rabto inaad ka soo kabato)
Aabo waan ku ammaaneynaa oo kuu duceyneynaa waana kuu mahadcelineynaa maxaa yeelay waxaan ognahay inaad dhageysatid oo uusan naxariistaadu dhamaaneyn, waxaan kaa baryeynaa inaad ka soo qeyb gasho codsiyadayada oo aad naga caawiso kuwa la codsaday, sidaas darteed, annaga oo ku raaxeysanay dhibaatooyinkayaga, waxaan dib uga fikiri doonnaa yaababkii xooggaaga.
Waxaan kaloo kaa codsaneynaa inaad kordhiso iimaankeenna iyo sadaqadeena si, annagoo raacnay tusaalaha salaadda iyo cibaadada Saint Aparicio barakeysan, aan had iyo goor kuu mahadnaqno.
Ciise Masiix Rabbigeenna. Aamiin. "
Salaaddan si aad u hesho waxyaabo lumay ama wax xaday waa mid aad u awood badan.
Ereyga Eebbe wuxuu ina barayaa sida loo tukado, aayadahaas waxaan ku aragnaa tusaalooyin aan lagaran karin oo caqiidooyin ah, oo hal salaad ah, mucjisooyin yaab leh laga helay.
Tani waa sababta aynaan u eryin salaadda maxaa yeelay iyadu waa mid aad u awood badan. Waxa kaliya ee la weydiisto duco si loo helo jawaabta la weydiisanayo waa in lagu sameeyo caqiido, aaminaad ah in wixii aan weydiisanno la siin doono.
Waxaa jira kuwa loo bartay sameynta ujeedooyin salaadeed dhowr maalmood ama saacad gaar ah, laakiin runtu waxay tahay in taasi ay ku xiran tahay hadba waxa qof walba qalbigiisa u diyaarshay, maxaa yeelay taasi waa waxa ugu muhiimsan.
Nalal ma shidi karaa markaan tukanaayo?
Arinka shumacyada ayaa muhiimad weyn leh iyo jawaabta su'aashani waa mid soo cusboonaatay.
Shumacyada kaligood ma awood badna laakiin waxay gacan ka geystaan ​​sidii deegaanka oo dhan looga dhigi lahaa mid jawi wanaagsan leh sidoo kalena loo qaadan karo hadiyado loogu talo galay quduusiintaada maxaa yeelay adeegsiga iyaga ayaa u baahan maalgashi taas oo inkasta oo ugu yar, loo tixgeliyo ficil ahaan Iimaan iyo is dhiib
Goormaan tukadaa salaadda si aan u helo waxyaabo lumay?
Salaada waa in la sameeyaa waqti kasta oo maalinta ah iyo meesha looga baahan yahay.
Ma jiro waqti cayiman Taasi waa wax fiican, hase yeeshe, waxaa jira dad badan oo dhaha salaadda subax hore oo xoog badan.
Awood u yeelashada ku tukashada meel kasta iyo markasta oo salaaddu ka dhigto hubkeena ugu wanaagsan, waxaan ku dhex geli karnaa baabuurka, shaqada, gurigayaga ama kulannada qaarkood oo aan ku duceynaa maskaxda iyo qalbiga iyo in salaadda lagu helo waxyaabaha lumay waa sida ugu awood badan sida waxa kaniisada lagu sameeyo.
Salaad awood leh si ay u soo jiitaan nin
Salaad adag si aan kuula riyoodo